ဗုဒ္ဓအင်ပါယာကြီး မွတ်ဆလင်များကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ခြင်း
ဗုဒ္ဓအင်ပါယာကြီး မွတ်ဆလင်များကြောင့် ကျရှုံးခဲ့ခြင်း *************************************** ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး ပထမသံဃာယနာကို အဇာတသတ်မင်း ဦးဆောင်တင်ပြီးနောက် အရှင်ကသဿဖမထေရ် ဦးဆောင်သော ရဟန်းသံဃာများသည် ဗုဒ္ဓအမွေဖြစ်သော ဓမ္မဒေသနာများကို ဖြန့်ချီ၍ အခြားသောတိုင်းပြည်များကို သာသနာပြုရန် ရဟန်းသံဃာများနှင့်အတူ ဒေသစာရီကြွချီတော် မူခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြီး နှစ်ပေါင်း၃၀၀ခန့်တွင် သီရိဓမ္မာအာသောကမင်းကြီးဦးဆောင်၍ အီရတ် ၊ အီရန် ၊ ပါကစ္စတန် ၊ အာဖဂန်နစ္စတန် ၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား ၊ ဘင်္ဂါလားဒေ့ရှ် ၊ မြန်မာ(သထုံ) ၊ သီရိလင်္ကာတို့ကို ပိဋိ၃ပုံများဖြန့်၍ ကိုးတိုင်း ကိုးဌာန သာသနာပြုစေလွှတ်ခဲ့ကြသည်။ အိန္ဒိယပြည် တစ်ဝန်းလုံးကို စုစည်း အုပ်ချုပ်နိုင်သောဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ ဘုရင်ကြီးများ ဖြစ်ကြသော စန္ဒဂုတ္ထ၊ မောရိယ ၊သိရီဓမ္မာသောက၊ ဟာသျှ...၊ သမုဒြဂုတ္တ ကဲ့သို့သော ဘုရင်ကြီးများသည် ၇¬ရာစုမှ ၁၃ ရာစုတိုင်အောင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌မပေါ်ပေါက်ခဲ့သေးပါ။ ထိုကဲ့သို့ဘုန်းတန်ခိုးအင်အားချို့တဲ့နေစဉ်ကာလများမှာ အာရပ်၊အာဖဂန်နှင့် မဂိုဘုရင် များတို့က ၄င်းတို့၏တန်ခိုးအာဏာတိုးချဲ့လို၍လည်းကောင်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်ပွားလို၍လည်းကောင်းတစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ် ဖော်ပြပါရာစုများအတွင်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးသို့ အနောက်မြောက်ဖက်အရပ်မှ ဝင်ရောက်၍ သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အိန္ဒိယတိုက်ငယ် ဆင့်(ဒ်)ပြည်နယ်ကို ပထမဦးစွာ အောင်နိုင်သိမ်း ပိုက်ခဲ့သူမူဆလင်စစ်သူကြီးအမည်မှာ “မိုဟာမက်ဗင်ကာဆင်“ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၊ဆင်းပြည်နယ် စသည်ဖြင့် ဟိန္ဒူမြစ်ဝှမ်းဒေသတွင် အထူးအားဖြင့် ခြေကုပ်ယူ၍ ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်မင်း လုပ်ခဲ့တယ်။ ပထမဦးစွာ အာရပ်တို့ကလည်းကောင်း၊နောင် အာရပ်တို့ တန်ခိုးမှိန်သောအခါ အာဖဂန်တို့ကလည်းကောင်း ၊ နောက်ပိုင်း မဂိုတို့ကလည်းကောင်း အစ္စလာမ်ဘာသာပြန့်ပွားရေးကို လူသာလဲပြီး မူမလဲသောဝါဒဖြင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသဖြင့် ယနေ့တွင် အိန္ဒိတိုက်ငယ်၌ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ၈၅ သန်းနဲ့ ၊ ပါကစ္စတန် သန်း ၈၀ ခန့်နှင့် အိန္ဒိယ ပြည်ထဲမှာပင် သန်းပေါင်း ၁၀၀ (၁၀-ကုဋေ)ခန့်ထိအောင် လူဦးရေများပြားစေခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်း အခြေပြစာအုပ်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာပြန့်ပွားရေးကို လက်နက်အားကိုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ မူဆလင်တွေဟာ အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ကနေ တစ်နိုင်ငံပြီးတစ်နိုင်ငံ ဘာသာရေးကို သိမ်းသွင်းပြီး ၀ါးမျိုးလာခဲ့ရာမှာ နိုင်ငံငယ်များဖြစ်ပြီး လူဦးရေးနည်းပါးတဲ့ဆီးရီးယား၊ အီရတ်၊ အီရန်၊ အာဖဂန်စတဲ့ နိုင်ငံငယ်များကို ၀ါးမျိုးရတဲ့အချိန်ဟာ သိပ်မကြာလှပေမယ့် အိန္ဒိယပြည်ကြီးကျတော့ ဟိန္ဒူဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့က မူဆလင်တို့အရင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီး အရိုးစွဲနေကြပြန်၊ လူဦးရေကလည်း ထူထပ်များပြားပြန်ဆိုတော့ ရုတ်တရက်မ၀ါးမျိုနိုင်ကြပဲ ဆင်ခေါင်းခွေးချီသလို ရာစုနှစ်အတော်များများ ကြိုးစားအားထုတ်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အိန္ဒိယ ပြည်ကြီး ဗြိတိသျှထံမှ လွတ်လပ်ရေးရယူတဲ့အခါ မူဆလင် ဘာသာဝင်များပြားတဲ့ ယခု ပါကစ္စတန်ခေါ်တဲ့ အရပ်ဒေသနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှခေါ်တဲ့ အရပ်ဒေသတွေကို နိုင်ငံသီးခြား ဖဲ့ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒီလို မူဆလင်များရာ အရပ်ဒေသတွေကို ဖဲ့ပေးပြီးတာတောင် ယနေ့ကမ္ဘာမှာ မူဆလင်အများဆုံး မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလွဲလျှင် အိန္ဒိယပြည်ထဲရှိ မူဆလင်တွေက ကမ္ဘာမှာ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ တတိယနှင့်စတုတ္တနိုင်ငံတွေဟာလည်း အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ထဲက စောစောကတင်ပြခဲ့တဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ ပြည်မှာခံရတာက ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေသာမကပါဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကျတော့ အမြစ်ပါမကျန် ကျွတ်ကုန်ပါတော့တယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း (၃၀၀)ခန့် အကြာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သူ့အလိုအလျောက် သက်ဝင်ယုံကြည် ကြည်ညိုပြီး ကူးပြောင်းလာခဲ့တဲ့ သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးဟာ အများသိတော်မူတဲ့ အတိုင်း ကိုးတိုင်း၊ကိုးဌာန သာသနာပြု စေလွှတ်ရုံနှင့် အားမရသေးဘဲ သားတော်သမီးတော်တို့ကို သာသနာ့ဘောင်သို့ သွတ်သွင်းချီးမြုင့်ခြင်း ပြုခဲ့ပါတယ်။ နောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မင်းများကလည်း သာသနာတော်ကို ဆက်လက်၍ အားပေးကြပါတယ်။ အိန္ဒိယပြည် နာလန္ဒာဗုဒ္ဓတကသိုလ်ကြီးကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ လာရောက်၍ ပညာဆည်းပူးနိုင်ရန် သာသနာ သက္ကရာဇ် ၁၀၀၀ ခန့်တွင် ကုမ္မာရဂုတ္ထမင်း တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခြား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မင်းတို့ကလည်း ၀ိက္ကမသီလာ တက္ကသိုလ်, လေဘီ တက္ကသိုလ် , သြဒန္တပူရိ တက္ကသိုလ်, သောမရူပမ တက္ကသိုလ်, ဖဂန္ဒလ တက္ကသိုလ်, အစရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးများကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး စာသင်သားရဟန်းတော် ထောင်သောင်းချီ ၍ရှိခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နိုင်ငံကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ တရုတ်ပြည်၊ ဂျပန်ပြည်၊ အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်းစုများ (ထိုစဉ်က သီရိဝိဇယ သုဝဏ္ဏဘုမိ နိုင်ငံတော်) စသည်တို့မှ စာသင်သား ရဟန်းတော်များ၏ ဗုဒ္ဓစာပေပညာ ဆည်းပူးရာ တက္ကသိုလ်ကြီးများ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယင်း တက္ကသိုလ်ကြီးများမှာ မူဆလင် အာရပ် တို့သည် လည်းကောင်း၊ အာဖဂန် မူဆလင် တို့သည်လည်းကောင်း၊ တူရကီ မူဆလင်တို့ကလည်းကောင်း ခေတ်အဆက်ဆက် မီးတိုက် ဖျက်ဆီးခြင်း၊စာသင်သား ရဟန်းတော်များကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း စသည်ဖြင့် အပြီးတိုင် ချြေမှုန်းခြင်းခံရ၍ အိန္ဒိယမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တို့ နလန်မထူနိုင်အောင် ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ မူဆလင်သမိုင်းသုတေသီ မိန်ဟဇက်က “မူဆလင်မြင်းစစ်သည်တော်တွေဟာ နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ကြီးကို မီးတိုက်ဖျက်ဆီးပြီး ရဟန်းတော်ပေါင်း သောင်းနှင့်ချီ၍ သတ်ဖြတ်ပါတယ်။ ရက်ရက်စက်စက် အရှင်လတ်လတ် မီးတိုက်ပြီး သတ်ဖြတ်ပါတယ်။ စာပေ၊ ပိဋိကတ်တော်ကြီးများကို မီးတိုက် ဖျက်ဆီးကြရာတွင် လနှင့်ချီပြီး မီးလောင်၍နေတယ်” လို့ မှတ်တမ်း တင်ထားပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကွယ်ပရခြင်း အကြောင်းတစ်ရပ်တွင် ဟိန္ဒူ တို့၏ ပယောဂနှင့်ရက်စက်မှု တို့ပါဝင်သော်လည်း အပြီးတိုင် အမြစ်ပါမကျန် သုတ်သင်ခံရခြင်းမှာ မူဆလင်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ များပြားလှသော ရဟန်းတော်များနှင့် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးများကို အလွယ် တကူ ဖျက်ဆီးနိုင်ရခြင်း အကြောင်းကတော့ ဗုဒ္ဓ ရဟန်းတော်များ အနေဖြင့် တုတ်၊ခါး၊ လက်နက်ဆိုလျှင် လုံးဝမကိုင်ရလေတော့မြင်းစစ်သည်တစ်ထောင် မပြောနှင့် လက်နက်ကိုင် အနည်းငယ်ခန့် ဆိုလျှင်လည်း ခံရမှာပါပဲက်နက်ရှိနဲ့ လက်နက်မဲ့တို့၏ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တို့က ၀ိနည်းတော်နဲ့ အညီကျောင်းသီးခြား၊ ၀တ်ရုံသင်္ကန်းသီးခြားဆိုတော့ရှာဖွေသုတ်သင်ပစ်ဖို့လွယ်ပေမယ့် ဟိန္ဒူဘာသာကို ဦးဆောင်ကြတဲ့ ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတွေကျတော့ ၀တ်ရုံ၊ ကျောင်းသီးခြားမရှိလို့ရှာဖွေရတာ သိပ်မလွယ်လှဘူး။ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသာ ၀ှက်ထားတဲ့စလွယ်ကို အဓိကထားရှာဖွေပြီးမှ သတ်ဖြတ်ရပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ဟိန္ဒူဘာသာတို့ ဂျိန်းဘာသာတို့ဟာ အိန္ဒိယမှာ ကြွင်းကျန်တဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မဂိုဘုရင် အော်ရန်ဇစ်လက်ထက်မှာ ဟိန္ဒူတို့ရဲ့ဘာသာရေး ဦးစီးဦးဆောင် ဗြဟ္မဏများကို ရှာဖွေ၍ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏစလွယ် (၅) ပိဿာရမှ မျက်နှာတော်ကြည်ပြီး ပွဲတော်တည်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်နေတိုင်း ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏစလွယ်( ၅ )ပိဿာ ရအောင် မူဆလင်စစ်သားတွေက ရှာဖွေဆက်သကြရပါတယ်။ သူတို့ရှာဖွေကြပုံက ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ သူတို့ရှာဖွေစုံစမ်းလို့ ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတစ်ယောက် ယောက်ကို ဖမ်းမိလျှင်သင်ဘာအယူလဲလို့ ပထမ မေးပါတယ်။ အမေးခံရသူက ကျွန်တော် အစ္စလာမ်ပါလို့ ပြန်လည်ဖြေကြားလျှင် အစ္စလမ်ဆိုလျှင် ဒီစလွယ်ကို မလွယ်ရဘူး။ နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတွေ့ရင် သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး စလွယ်ကို ဓားဖြင့်ဖြတ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမေးခံရသူက အယူပြင်းထန်လို့ ကျွန်တော်ဟိန္ဒူဘာသာလို့ဖြေခဲ့လျှင် ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ပြီးမှ ဒီစလွယ်ကို ဖြုတ်ယူပါတယ်။ အော်ရန်ဇစ် ရက်စက်မှုကြောင့် သူလည်းသေရော ဟိန္ဒူ မဟာရတ်သာတို့၊ ဂုဂျရတ်တို့၊ ဆစ်(ခ)တို့အားလုံးက တော်လှန်ပုန်ကန်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာတော့ ရဟန်းတော်တွေ ဆိတ်သုဉ်းသွားပြီးမို့ နာလန်မထူနိုင်တော့ပဲ နောင်နှစ်တော်တော်ကြာတော့ အပြီးအပိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပျောက်ကွယ်သွားရပါတယ်။ အထက်က တင်ပြခဲ့တာတွေဟာ အိန္ဒိယတိုက်နယ်မှာ ဘာသာရေး နယ်ချဲ့ အဓမ္မခံရပုံ သမိုင်း ကြောင်းအကျဉ်းပါပဲ။ အိန္ဒိယပြည်ဟာ ခဲမှန်ဘူးတဲ့စာသူငယ်လို နောက်ဆုံး ၁၉၄၉ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရယူတဲ့အချိန်မှာ ၄င်းပိုင်နယ်မြေထဲက မူဆလင်အများစုနယ်မြေတွေကို မချိတင်ကဲ ဖဲ့ပေးလိုက် ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အိန္ဒိယအမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ မဟတ္တမဂန္ဒီတို့ နေရူးတို့က မူဆလင်တွေ သီးခြားခွဲမထွက်စေချင်ပါဘူး။ သူတို့ကို အထူးဦးစားပေးပြီး ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းပြီး ဟိန္ဒူနဲ့ တန်းတူရည်တူလက်တွဲပြီး နေစေချင်ပါတယ်။ ဒါပင်မယ့် မူဆလင်ထုကြီးနဲ့ သူတို့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာဂျင်းနားတို့က ဖိအားပေးပြီးခွဲထွက်ဖို့ ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ ဟိန္ဒူတွေက ဘုရားလိုကြည်ညိုတဲ့ မဟတ္တမဂန္ဒီကလည်း မူဆလင်တွေ ဘယ်လိုရန်စစ ရန်စွာစွာ သည်းခံဖို့ အလျှော့ပေးပြီး ပေါင်းဖို့ဆောင်ရွက်နေတော့ သီးခြားနိုင်ငံခွဲထွက်လိုတဲ့ မူဆလင်တွေရော ခံနေရတဲ့ ဟိန္ဒူတွေကပါ အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ၁၉၄၇-ခုနှစ် ရက်တရက်မှာ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရမယ့်နေ့လို့ သတ်မှတ်ပြီး မူဆလင်တွေဟာ အချိန်းအချက်ပြုပြီး ဂျလီဝါနာဘတ်(ဂ်)ခေါ်တဲ့ ခရိုင်အတွင်းမှာ ဟိန္ဒူထောင်ပေါင်းများစွာကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့လည်း စစ်တကောင်း န၀ခါလီခရိုင်မှာ ဟိန္ဒူရာဂျာ မိသားစုများမှအစဟိန္ဒူထောင်ပေါင်းများစွာကို သွေးအေးအေးနဲ့ ဆိတ်များ၊သိုးများ သတ်သလို ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ မူဆလင်တွေက လက်ဦးမှုရတော့ ဟိန္ဒူတွေခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပင်မယ့် သူတို့က ပါးကြ လျှင်ကြပါတယ်။ သတ်လို့ပြီးတော့ အိန္ဒိယပြည်မှ ခွဲထွက်ရေးကို မလိုးလားတဲ့ ဟိန္ဒူတို့ ဘုရားလိုကိုးကွယ်တဲ့ မဟတ္တမဂန္ဒီကြီးထံ ချဉ်းကပ်ကြပါတယ်။ ‘ ပြီးတာတော့ပြီးခဲ့ပါပြီ ‘ နောက်ထပ် ဟိန္ဒူ မူဆလင် မကွဲရအောင် ဆိုပြီး ‘ လိမ္မာပါးနပ်တယ်ခေါ်မလား၊ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာတယ် ‘ ခေါ်မလား ချဉ်းကပ်တော့ မဟတ္တမဂန္ဒီကလည်း ခန္တီပါရမီဦးထိပ်ထားသူပီပီ ဟိန္ဒူများတဲ့ ဒေသတွေမှာ ပြန်ပြီး လက်စားမချေဖို့ လက်တုန့်မပြန်ဖို့ သူ့စကားနားမထောင်လျှင် သူအစာငတ်ခံမယ်လို့ အားလုံးကို ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူခေါင်းဆောင်တွေကလည်း အခံရခက်၊အနေခက်နဲ့ အခက်တွေ့နေဆဲမှာ ဟိန္ဒူအယူသည်း အဖွဲ့အစည်းထဲက ဂေါ့(ဒ်)ဆေးအမည်ရှိသူတစ်ဦးက နာကျည်းပြီးတော့ မဟတ္ထမဂန္ဒီကို သတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ ဟိန္ဒူတွေလည်း မိအေးနှစ်ခါနာလိုက်ရပါတယ်။ မြွေပါလည်းဆုံး သားလည်းဆုံး ဆိုသလိုပေါ့။ ဒါနဲ့ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ခေါင်းမြီးခြုံဓလေ့ဟာ မူလက အိန္ဒိယမှာ မရှိပါ။ မူဆလင်ဘုရင်အသီးသီးတို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်၍ နယ်မချဲ့မီက ဟိန္ဒူမိန်းမတွေဟာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခဲ့ကြပါတယ်။ မူဆလင်တွေ ၀င်ရောက်ပြီးမှ ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေက မူဆလင်များ နည်းတူ အိမ်တွင်းပုန်းဓလေ့ကို လိုက်နာကြပြီး နောင်အခါအမှာ ထုံးစံတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘာသာရပ်စကားအသစ်ဖြစ်တဲ့ အုရဒူဘာသာဟာလည်း မူဆလင်တွေ ၀င်ရောက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှ အုရဒူဘာသာစကားရပ်ရယ်လို့ ပါရှန်း,အာရပ်,ဟင်ဒီဘာသာ စကားသုံးစုရောနှောပြီး ပေါ်ပေါက်လာ ပါတယ်။ ကျွဲနွားများကို ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာ လူတို့ရဲ့အသက် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် လည်းကောင်း၊ နို့ ၊ ဒိန်ခဲ၊ထောပတ် အစရှိသော အာဟာရကိုလည်းကောင်း၊ ရရှိကြလို့ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူဆလင်တွေကျတော့ နှစ်စဉ်တွန်ဘာနီအစ်နေ့များမှာ နွား၏ လည်မျိုကို ဓါးဖြင့်လှီးဖြတ်၍ သတ်စားခြင်းအားဖြင့်ဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်ပြုကြလို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပင်ရင်းဒေသခံဟိန္ဒူတွေ အတွက် ကြိမ်မီးအုံးသကဲ့သို့ နှစ်စဉ်ခံစားကြရပါတယ်။ ဒီလောက်နဲ့ပဲ အိန္ဒိယပြည်နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာအကြောင်းကို အကျဉ်းချုံးပြီး တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ (အကျယ်ကို မောင်ပေါ်ထွန်းရဲ့ သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေး စာအုပ်မှာ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်) အတွက်မှားက ရတက်ပွားရမည် •••••••••••••••••••••••••••••••••• ရှေးတုန်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံထက် ဗုဒ္ဓသာသနာရောင်ဝါ ပိုမိုထွန်းကားခဲ့တာကို လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထွန်းကားသလဲဆိုတော့ (၁)ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရဟန်းတော်တွေ သုံးသိန်းခန့်သာရှိပေမယ့် အိန္ဒိယမှာတော့ (၁၀)သန်းကျော်အောင် ရှိခဲ့ခြင်း၊ (၂) ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရန်ကုန်, မန္တလေးပရိယတ္ထိတက္ကသိုလ်ကြီးတွေ နှစ်ခုသာရှိပေမယ့် အိန္ဒိယမှာ (၁၀)ခု အထိရှိခြင်း၊ (၃) မြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ် တစ်ခုတစ်ခုမှာ စာသင်သား (၄၀၀)ကျော်သာ ရှိပေမယ့် အိန္ဒိယ တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာ နှစ်သောင်း ကျော်တောင် ရှိခဲ့ခြင်းစတဲ့ အချက်(၃)ချက် ကိုကြည့်လျှင် သိနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီနေ့ဒီအချိန်အခါမှာ အိန္ဒိယရောက်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်တွေ့ဘို့ရာ အလွန်ခဲယဉ်းတဲ့ အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒို့နိုင်ငံကိုတော့ မ၀ါးမျိုနိုင်ပါဘူးလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်ကြီးပြီး အတွက်မှားလို့ကတော့ ရတက်ပွားရပါလိမ့်မယ်။ ယခုလည်း မြန်မာတိုင်းရင်းသူတွေ တစ်စတစ်စ ၀ါးမျိုးခံနေရတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။ သိုက် ဖွား
ကြောက်စရာကောင်းသော ဘာသာတစ်ခု မွတ်စလင်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြား တိုက်ခိုက်နေကြောင်း သီတဂူဘုန်းတော်ကြီး သတိပေး
သီတဂူဆရာတော် နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အမေရိကန်ကော်မရှင် အဖွဲ့အား ပြောင်မြောက် ပြတ်သားသောစကား မိန့်ကြား ။
အပြည်ပြည်ဆုိုင်ရာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အမေရိကန်ကော်မရှင် အဖွဲ့သည် ၂၁-၈- ၂၀၁၄ ခု၊ ယနေ့ နံက်(၀၉း၀၀)နာရီတွင် သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၌ သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးအား လာရောက်တွေ့ဆုံသည့်ပွဲမှာ သီတဂူဆရာတော်ကြီးပြောလိုက် သည့် စကားများ
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတို့ကိုးကွယ်ရာ အဓိကကျသောဘာသာကြီး(၆)ခု ရှိကြပါ တယ်။ ကမ္ဘာဦးလူသားတွေ မြေကြီးပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး လူသားတို့သည် ကြောက်စိတ်ကိုအခြေခံ၍ နေကိုကိုးကွယ်ခြင်း၊ လကိုကိုးကွယ်ခြင်း၊ နတ်အမျိုးမျိုးကို ကိုးကွယ်ခြင်းတို့ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကို Primitive Religion လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ ခေတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ Religionတွေကို ကြောက်စိတ်က စတယ်လို့ ပညာရှိအများစု တို့က ဆိုကြပါတယ်။ အကြောက်တရားတွေမှ သက်သာရာရစေဖို့ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ အယူအဆတွေ စတင်ခဲ့ကြတာလို့ ဗုဒ္ဓကလည်း အတိအလင်း ပြောထားပါတယ်။ ဒါဆို ရင် ဘာသာတရားတိုင်းဟာ လူသားတွေရဲ့ရင်ထဲက အကြောက်တရားတွေကို သက်သာရာ ရစေဖို့နဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် အကြောက်တရားတွေကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘာသာတရားတချို့နဲ့ ကြောက် စရာ ကောင်းတဲ့ ဘာသာဝင်တချို့ ပေါ်ပေါက်လာတာဟာ အလွန်ပဲ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ Primitive Religionတွေရဲ့ နောက်မှာတော့ ဟိန္ဒူဘာသာ ပေါ်ပေါက် လာပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ နယ်မြေမှာ ဂျိန်းဘာသာရယ်လို့ ပေါ်ပေါက် လာပြန်တယ်။ ဂျိန်းဘာသာ ပေါ်ပေါက်လာပြီးသည့်နောက် အနှစ်လေးဆယ်လောက် အကြာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် ဂျိန်း ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ နယ်မြေမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ ဂျိန်းဘာသာဝင်တွေ နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူတကွငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲ နေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျိန်း၊ ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမိုင်းမှာ အချင်းချင်းသွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် နှိပ်စက်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရယ်လို့ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့က ဗုဒ္ဓဟာ ဗိဿနိုးဝင်စားတဲ့သူလို့ ဆိုတာတောင်မှ ပြန်လှန်တိုက်ခိုက်ခြင်း ပဋ္ဋိပက္ခမျိုး မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ဟောပြောရေးသားတုန့်ပြန်ချေပတာလောက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ၏နောက် အနှစ်ခြောက်ရာကျော်ကြာတော့ Jesus Christ ပေါ်ပေါက်လာပါခဲ့ တယ်။ Jesus Christ ဟောပြတဲ့ ပညတ်တော်(၁၀)ပါးမှာ ဗုဒ္ဓဟောပြသောသီလတရား ဗြဟ္မစရိယတရားတွေနှင့် ထပ်တူညီမျှတဲ့ အချက်တွေ များစွာတွေ့ရပါတယ်။ ခရစ်ယာန် သာသနာပြုတို့ အရှေ့အာရှဘက်ကို ၀င်ရောက်လာကြတော့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ နိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့ အိန္ဒိယ၊ သီဟိုဠ်၊ ဗမာ၊ ထိုင်း၊ ကိုးရီးယား၊ ဂျပန် စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ၀င်ရောက်ပြီး ခရစ်ယာန်သာသနာကို ဖြန့်ချီခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီခရစ်ယာန်သာသနာပြုတွေနှင့် သူတို့ရောက်ရာတိုင်းပြည်အသီးသီးက ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေဟာ အချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံပေါင်းသင်း၍ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပဋိပက္ခရယ်လို့ မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဂျိန်းဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဟာ သူတို့သက်ဆိုင် ရာ ဘာသာတရား အသီးသီးမှာ ဟောထားတဲ့ သီလ(morality)၊ မေတ္တာ (loving- kindness)၊ ကရုဏာ(compassion)ဆိုတဲ့ common-platformပေါ်မှာ အတူတကွ လက်တွဲ လျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာနှင့်ကရုဏာကို အခြေခံသောဘာသာရေးမှာ ပဋိပက္ခကင်းပြီးတော့ ကျန်းမာရေး ပညာရေး အစရှိတဲ့ လူမှုရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုသာ ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ ကူးပြောင်းဝင်ရောက်ကြတာတွေ အတိတ်မှာရော ပစ္စုပ္ပန်မှာပါ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက အတင်းအကြပ်နှိပ်စက်လို့ ၀င်လာကြတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲ ကူးပြောင်း ၀င်ရောက်ကြတာလည်း ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အများအပြားပဲ ရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေကခြိမ်းခြောက်လို့ ၀င်ရောက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဆန္ဒနဲ့ သူတို့ ၀င်ရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ဘာသာမဆိုလွတ်လပ်စွာ ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခွင့် freedom of worship, freedom of belief ဆိုတာရှိပါတယ်။
Aggressiveness and extremism ၀ါဒဟာ ဘာသာရေးမှာရော နိုင်ငံရေးမှာပါ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အစလို့ အားလုံးသတိပြုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ အီရတ်မှာ အစ္စလာမ်း မစ် အစွန်းရောက်တွေက ရှေးဟောင်း Zoroastrianism ဘာသာဝင်တွေကို သေနတ် နှင့်ချိန်ပြီးတော့ သူတို့ဘာသာထဲ အတင်းအကျပ် ၀င်ခိုင်းနေပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာ ထဲ မပြောင်းရင် သတ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ အာဖရိကမှာတော့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲ ၀င်ခဲ့ရောက်လို့ သေဒဏ် ပေးခံရတဲ့ သတင်းကိုလည်း ကြားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒို့အရှေ့အာရှကအင်အားချိနဲ့ တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံလေးတွေဟာ ယနေ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဓါးအောက် ကျရောက်ရမှာကို ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ် နေကြ ပါတယ်။ အနှစ်လေးဆယ်ကြာခရူးဆိတ် ဘာသာရေး စစ်ပွဲကြီးကို ကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ရတဲ့ စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုပါ။
အေဒီ-(၁၃ရာစု)နှစ်လောက်က တူရကီမှအိန္ဒိယပြည်ကြီးကို ဖြတ်သန်းချီတက်လာတဲ့ မွတ်စလင်စစ်တပ်ကြီးဟာ ပါလခေါ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကို တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီး၍ အတင်း အကျပ် အစ္စလာမ်းမစ်နိုင်ငံအဖြစ် ပြောင်းခဲ့တဲ့ သမိုင်းတစ်ခုရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမင်းဆက်ပေါင်း ၁၂-ဆက် မျှအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ပါလဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံပါပဲ။ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ အနှစ် နှစ်ဆယ်လောက် ကြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မွတ်စလင် Muslim State ထူထောင်လိုက် ပါပြီ။ ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှာလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဒီကနေ့ လက်နက် ကိုင်တိုက်ခိုက် နေကြပါပြီ။ မူစလင် နိုင်ငံထူထောင်ရေးပါပဲ။ ဘာသာရေးကို သန့်သန့် ရှင်းရှင်း၊ လူတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ရေး၊ စိတ်ထားဖြူစင်ရေးနဲ့ လူမှုရေး ကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေအတွက်သာ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီကနေ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ လောကမှာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ အစ္စလာမ်းမစ်နိုင်ငံ ထူထောင်ဖို့ လုပ်နေကြတာဟာ အလွန်ပဲစိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိင်ငံဟာ ၁၉၄၈-ခုနှစ်က အင်္ဂလိပ်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ခဲ့ ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်က ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံကို အနှစ်တစ်ရာနီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအင်္ဂလိပ် တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကားလမ်း ရထားလမ်းဖောက်ခြင်းစတဲ့ အလုပ်တွေအတွက် အလုပ်သမားတွေကိုအိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေပြီးစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ဥပဒေကင်းမဲ့စွာ နဲ့ မြောက်များစွာ တင်သွင်းခဲ့တယ်။ အမေရိကန်တွေ United Statesကို ထူထောင် ခဲ့စဉ်တုန်းက အာဖရိကကလူမည်းတွေကို ကျေးကျွန်အဖြစ် ခေါ်သွင်းခဲ့ကြသလိုပါပဲ။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂတ်ဆိုးကျိုးကို များစွာဖြစ်စေ ခဲ့တဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အနှစ်တစ်ရာအတွင်းမှာ ဗမာ့ တပ်မတော်ရယ်လို့ ဗမာတွေကို စစ်တပ်ဖွဲ့၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အံ့သြ စရာ ကောင်းတာက ကရင်တပ်မတော် ကချင်တပ်မတော် ချင်းတပ်မတော် ကယား တပ်မတော်တွေရယ်လို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုဖြစ်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို စစ်တပ်ဖွဲ့ပြီး ဒို့ဗမာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရအင်္ဂလန်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာ သူတို့ဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့ ကရင်တပ်တွေ ကချင် တပ်တွေ ကယားတပ်တွေ အားလုံးသူပုန်ထပြီး ဗမာအစိုးရကို တော်လှန်ကြတော့တာ ပါပဲ။ အဲဒီပြဿ နာတွေကို ဒီကနေ့တိုင် ဒို့နိုင်ငံမှာဖြေရှင်းလို့ မရသေးပါဘူး။ အဲဒါဟာ လွတ်မြောက်ပြီးစ ဒို့လို ကိုလိုနီနိုင်ငံလေးများရဲ့ ခံစားရစမြဲဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခတွေပါပဲ။ နောက် တစ်ခုရှိသေးတယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခွင်မှာ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အနှစ်တစ်ရာနီးပါးမျှ ကာလပတ်လုံး ဥပေဒမဲ့ ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ (၁၉၄၈-၄၉) ခုနှစ် များမှာ မူဂျာဟစ်အမည်နဲ့ သူပုန်ထပြီးတော့ ပြည်နယ်တောင်းခဲ့ကြတယ်။ Musulim State ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီအစ္စလာမ်းမစ် မူဂျာဟစ်သူပုန်တွေကို ဗမာ့တပ်မတော်ဟာ အကြိတ်အနယ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒီကနေ့တော့ သူတို့ဟာ ဘင်္ဂါလီလို့လည်းမပြောဘူး။ မူဂျာဟစ်လို့လည်း မပြောဘူး။ ရိုဟင်ဂျာလို့ ကြေညာ ပြီးတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် သူတို့အိမ်တွေကို မီးရှို့ပြီးတော့ သူပုန်ထဖို့၊ သီးခြားနယ်မြေ တောင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ဒို့တတွေက ကမ္ဘာမှာဒုတိယအင်အားအကြီးမားဆုံး ငွေကြေးအကြွယ်ဝဆုံး ဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ်ကမ္ဘာကို မပြိုင်နိုင်ကြဘူး၊ မယှဉ်နိုင်ကြဘူး။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တွေ ထဲမှာတောင် အစ္စလာမ်းမစ်နိုင်ငံတွေက ဒုတိယနေရာအများဆုံးမှာ ရောက်နေကြပြီ။ မီဒီယာလောကမှာလည်း Money Powerနဲ့ မီဒီယာတွေအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးလို့နေပါပြီ။ Money Powerအားကောင်းတဲ့ အစ္စလာမ်တွေက ကမ္ဘာမှာ ရေဒီယို တယ်လီဗေးရှင်းနဲ့ ဂျာနယ် တော်တော် များများကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို သြဇာအာဏာ ကြီးမားတဲ့ မီဒီယာလောကကို ဒို့ဆင်းရဲတဲ့ဗမာနိုင်ငံလေးဟာ ထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ ဗမာကပြောသမျှ ကမ္ဘာကမယုံဘူး။ အစ္စလာမ်ကပြောလိုက်ရင် တစ်ကမ္ဘာလုံး တအုန်း အုန်းဖြစ်နေကြတယ်။ ဒို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းဟာ ကမ္ဘာမှာ မကောင်းဘဲဖြစ် နေတာဟာ အစ္စလာမ်မီဒီယာတွေရဲ့ သြဇာအာဏာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒို့ကတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓဆုံးမတဲ့အတိုင်း favour နှင့် fear အစွန်းနှစ်ဘက်က လွတ်အောင်ရှောင်ပြီး ဒို့တိုင်းပြည်နဲ့ဒို့လူမျိုးကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ စောင့်ရှောက် ကာကွယ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ပြောကြားလိုတာကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီ ဘ၀နဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာနီးပါးနေခဲ့ကြရတဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတဲ့အခါမှာလည်း နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်နီးပါး ပြည်တွင်းမှာ လူမျိုးရေးစစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခက်အခဲ ပေါင်းများစွာနဲ့ ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ ဤအခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးမည် ဟု ပြည်ပအဖွဲ့အစည်း အကူအညီတွေလာကြသော်လည်း ပြဿ နာတွေ ပြေလည် မသွားဘဲ ပိုမိုခက်ခဲအောင် လုပ်သွားခဲ့ကြတာတွေ ရံခါမှာတွေ့ရပါတယ်။
သို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ် ဒီနေ့ပြောကြားလိုသည်မှာ ထိုအခက်အခဲပြဿ နာများ ကို ခင်ဗျားတို့တတ်နိုင်သည့်ဘက်က ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးကြပါလို့ ကျွန်ုပ် မေတ္တာ ရပ်ခံလိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက - လူမျိုးရေးစစ်ပွဲတွေ ချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့အစိုးရ က စားပွဲဝိုင်းမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက် နေတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေး အစွန်း ရောက်နှင့် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တချို့က ဘာသာရေးပဋိပက္ခများဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ဖန်တီး နေကြတာကိုလည်း တွေ့နေကြ ရပါတယ်။ ဤပဋိပက္ခများကို ငြိမ်းချမ်းသွားအောင်ဝိုင်းဝန်း ဖြေရှင်းပေးကြဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းအောင် ဖြေရှင်းပေးရာမှာ နည်းစနစ်ဟာ အလွန် အရေးကြီး ပါတယ်။ ဖြေရှင်းရင်း ဖြေရှင်းရင်းဖြင့် ပို၍ပို၍ ရှုတ်ထွေးမသွားအောင် သတိပြုကြဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာပီပီ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်း သည်းခံခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ သူတပါးအကျိုး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား စွန့်လွတ်ခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ခန္တီ မေတ္တာ သတိ ပညာ ကြီးကြီးထား၍ ဤဘာသာရေး ပြဿ နာများကို အကြမ်းဖက်ခြင်း လုံးဝကင်းလျှက် ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရ (Ph.D., D.Litt.)
Labels: သူ့ဓလေ့သူ့ဘာသာ, အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုသည်မှာ
မန္တလေးမှာ ဓါးတွေလှံတွေ လေးခွတွေနဲ့ ဓါးကာအင်္ကျီတွေ မိတာ နဲ့ ရန်ကုန် တောင်ဒဂုံ တောင် ဥက္ကလာ တို့မှာ ဂျီးဟဒ်လုပ်ဖို့ စာဝေတာကို စာရွက်တွေတွေ့ကြတော့ အချို့က သိပ်နားမလည်ပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်တယ် ။
စာရွက်တွေဝေပြီး ပေါ်တင်ဂျီးဟဒ်လုပ်လို့ရပါ့မလား လို့သံသယနဲ့စဉ်းစားရင်မှားတယ်
(၁) မွတ်ဆလင်တွေစဉ်းစားတာကရှင်းတယ် - စာရွက်ဝေတယ်ဆိုတာ အမိန့်ကျကြောင်းကြေညာတာ
(၂) ဝေတဲ့လူကို မမိအောင်လုပ်တယ် မိရင်လည်း ဥပဒေအရအရေးယူခံဖို့ အသင့်ပဲ
(၃) ကျန်မွတ်ဆလင်တွေကလည်း သဘောတူတယ် ( မတူရင်ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာရမယ်) မကြေညာရဲဘူး ဘာလို့ဆိုရင် အဲလို သဘောမတူကြောင်းကြေညာရင် အီမန်ပျက်တယ်လို့ခံယူလို့
(၄) မွတ်ဆလင်တပ်ကြီးနဲ့လာရင် စစ်တပ်ကနှိမ်နင်းမှာပေါ့လို့ စဉ်းစားရင်မှားတယ် မွတ်ဆလင်တပ်ကြီးမလာဘူး
(၅) မွတ်ဆလင် ဗလီဆရာ တစ်ယောက်နောက်မှာ မွတ်ဆလင် ယောက်ျား ဆယ်ယောက် ဆယ့်ငါးယောက်ရှိရင်လုံလောက်တယ်
(၆) နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလုပ်ကြံမှာမဟုတ်ဘူး - ယုတ်စွအဆုံး ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးရာထူးကိုတောင်လုမှာမဟုတ်ဘူး
(၇) မွတ်ဆလင် ဗလီဆရာ တစ်ယောက်နောက်မှာ မွတ်ဆလင် ယောက်ျား ဆယ်ယောက် ဆယ့်ငါးယောက်က သူတို့ အ၀န်းအ၀ိုင်းအနားမှာ မှောင်ရီဖြိုးဖျဖြစ်စေ လူပြတ်သည့်အချိန်ဖြစ်စေ ထွက်ခုတ်ထိုးနှက်သတ်ဖြတ်မယ် ( မွတ်ဆလင်မဟုတ်သော မည်သည့်လူထီး/လူမ/ကလေး/ဘုန်းကြီး) ဖြစ်ပါစေ ခုတ်ထစ်ထိုးကြိတ်မည်
(၈) အမှုဖြစ်လျင် မိလျင်ခံမည်
(၉) မျှော်မှန်းရလာဒ် - ဂျီးဟဒ်အောင်မည်သည် - ဘာသာခြားသေပြီ- ဤ အရပ်တွင် ဘာသာခြားများကြောက်လန့်ရှောင်ကျဉ်ထွက်ခွါလိမ့်မည် များမကြာမီ ဤအရပ်သည် မွတ်ဆလင်အများစုရှိသောအရပ်ဖြစ်လာမည်
(၁၀) နောက်ဆုံးရလာဒ် မွတ်ဆလင်က ဘာသာခြားထက် ဆယ်ဆ များလာစေသာ နိုင်ငံကို လူဦးရေအများစုစိတ်ဆန္ဒ ဆုံးဖြတ်နည်း ( ဒီမိုကရေစီ အရ ) မဲခွဲပါက ရှရီအတ်ကို ပြဌာန်းကျင့်သုံးနိုင်ပြီ
(၁၁) ရှရီအတ် ကျင့်သုံးပြီဆိုပါက ဘာသာခြားများကို တရားဝင်သတ်ဖြတ်သည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်မည်ဖြစ်သည် ။
တရုပ်ပြည်ဓါးခုတ်မှုကို ကျနော်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်တယ်
မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ စဉ်းစားချက်ကရှင်းတယ် -
မွတ်ဆလင်မှန်သမျှဟာ မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူမည်သူ့ကိုမဆို မည်ကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်သည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဟုစဉ်းစားသည် ။
မွတ်ဆလင်မှန်သမျှက မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူမှန်သမျှကို ရန်သူဟုသတ်မှတ်သည်
မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူတစ်ယောက် သေဆုံးခြင်း နှင့် ကျန်ရှိသော မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူများ အဆိုပါ ဒေသကိုကြောက်ရွံ့စွန့်ခွါခြင်းကို အကျိုးအမြတ်ဖြစ်သည်ဟု မွတ်ဆလင်များကသတ်မှတ်သည် ။
ဒေါ်စုတက်တဲ့ ဆရာတော်မွေးနေ့ကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်တယ်
အားစမ်းကြည့်ပြီးပြီ မဟန်ဘူး ဆိုတာသိတယ် - မျိုးစောင့်ကိုပါ လက်ခံတော့မယ် ဆိုတာ မှန်းလို့ရပြီ ရလာဒ်က သမ္မတဖြစ်ချင်တာ -
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမလည်တာ ကတော့ ဦးရွှေမန်းပဲ
သူက ဒေါ်စုက အသာလေးမသွားပြီး နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သူ့စရိတ်နဲ့ သူသွားရင် သူသာ မင်းသားဖြစ်ပြီလို့တွေးတာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အားသာချက်ကတော့ လုရဲတယ် စုဖုရားလတ်လိုပဲ - မျိုးစောင့်ကို အရင်ဝင်လုမှာ
လူထုကတော့အမြတ်ထွက်တာပေါ့ - ဘာလို့လည်းဆိုရင် လူထုက ဘယ်သူ့လူမှမဟုတ်ဘူး
၂၀၁၅ နောက်ဆုံးအဆုံးအဖြတ်က မွတ်ဆလင်ကျမ်းဆိုးတွေကို အပြတ် ဆင်ဆာဖြတ်ရဲတာ - ပါတီတွင်းမှာ မွတ်ဆလင်သန့်စင်ရေးလုပ်တာတွေဟာ အခရာကျမယ်
Labels: သတင်းစုံ, သူ့ဓလေ့သူ့ဘာသာ, အစ္စလာမ်လုပ်ရပ်များ
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် အရေးပါကြောင်း အိုဘားမားပြော
နှစ်ပေါင်းများစွာ အမှောင်ဖုံးခဲ့တဲ့ခေတ်ကနေ လူထုကိုယ်စားပြု အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက သမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အချိန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ပြန်လည် ပါဝင်လာနိုင်ရေးဟာ ခရစ်ယာန်နဲ့ မူဆလင်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အပါအ၀င် အခြေခံ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ဘယ်လောက် လေးစားတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ် မူတည်တဲ့ အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သမ္မတအိုဘားမား ပြောဆိုသွားပါတယ် ။
သို့သော်လည်း သမ္မတ အိုဘားမားဟာ ၊ ဘာသာအယူမတူသူတွေ သတ်ဖြတ်နှိပ်ကွပ်ဖို့ ၊ အခြေအနေမကောာင်းလျင် အယောင်ဆောင်မိတ်ဆွေဖွဲ့နေဖို့ နှင့် အင်အားသာလွန်ချိန်မှာ ဘာသာခြားများကို အပြီးပိုင်သုတ်သင်ချေမှုန်းဖို့ သင်ကြားခြင်းခံထားရတဲ့ မူဆလင်တွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အခြားသော ဘာသာများကို လေးစားဖို့လိုကြောင်းပြောကြားရန် မေ့လျော့သွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ် ။
ထို့အပြင် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ဘယ်လိုအရေးပါကြောင်း အကျယ်ချဲ့ပြောဆိုရန်အချိန်မရှိသဖြင့် ချန်လှပ်လိုက်ရကြောင်း အကျယ်ချဲ့ပြောဆိုလိုသည့်အချက်မှာ ၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အမေရိကန်တွင် တစ်စတစ်စ နယ်ချဲ့နေရာယူနေသည့် မွတ်ဆလင်များအန္တရယ်ကို အလေးထားကြရန် တိုက်တွန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည် ။
Labels: မူဆလင်အကြံ ၊ တို့လက်မခံ, သတင်းစုံ
ဆွီဒင်လူမျိုးများရဲ့ ပြင်မရတော့တဲ့ အကြီးမားဆုံးနောင်တ ၊ မြန်မာပြည်သို့ရောက်နိုင်သလော
ဆွီဒင်လူမျိုးတွေ ပြင်မရတော့တဲ့ အကြီးဆုံး နောင်တကတော့ မူဆလင်တွေကို မိမိနိုင်ငံတွင်းမှာ နေထိုင်ခွင့် ပေးလိုက်တာပါပဲ။
သူတို့ကို ကယ်တင်တာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သာ ဖြစ်ပါသတဲ့။ သူတို့ ဒုက္ခရောက်နေတာ မမြင်ရက်လို့ ခုလို ကယ်တင်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသတဲ့။ ဆွီဒင်တွေဟာ ကာဖိရ်တွေဖြစ်လို့ ဆွီဒင်မတွေကို မုဒိမ်းကျင့်တာ ကုသိုလ်တောင် ဖြစ်ပါသတဲ့။မိုဟာမက်တပည့်တွေက မိုဟာမက်လိုပဲ မိုက်ရိုင်း၊ စော်ကား၊ ကျေးဇူးကမ်းချက်က ကမ်းကုန်တယ်။
မူဆလင်တွေက သနားစရာပါ၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ပေးသင့်တယ် ဆိုသူတွေ ဆွီဒင်ကို နမူနာကြည့်ထားကြလို့ပဲ ပြောလိုက်ပါရစေ။
Labels: မူဆလင်အကြံ ၊ တို့လက်မခံ, အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုသည်မှာ, အမျိုးသမီးနှင့်မူဆလင်
အစ်စလမ် ခြေမှုန်းရေး အတွက် စပိန်ပြည်သူများ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေ့ပြီ
အမေရိက၊ ကနေဒါ၊ ယူကေ ၊ အောစတေးလျနဲ့ (တစ်ကမ္ဘာလုံး)က လူတွေ စပိန်တွေဆီက သင်္ခန်းစာယူသင့်တယ်။ စပိန်နိုင်ငံ Seville မြို့ကလူထုဟာ သူတို့မြေပေါ် ဗလီအသစ်ထပ်ဆောက်မှာကို ဘယ်လိုတားဆီးရမယ်ဆိုတာ သိသွားကြပြီ။
ဗလီဆောက်မယ့်မြေမှာ ဝက်သေကိုမြှတ်၊ ဒေသတွင်း မီဒီယာ ကနေတဆင့် ဝက်သေမြှပ်ထားတဲ့မြေဖြစ်ကြောင်း သတင်းဖြန့်လိုက် သတဲ့။ အစ္စလမ်မစ်ဥပဒေက ဝက်သေမြှပ်ထားတဲ့မြေပေါ်မှာ ဗလီမဆောက်ရလို့ တားမြစ်ထားတယ်။ ဒီအကြောင်း သိတာနဲ့ ဗလီပဆောက်မယ့် ပရောဂျက်ကို မွတ်စလင်တွေက ချက်ချင်း ဖျက်သိမ်းသွားပါ သတဲ့။
တကယ်တော့ အဲဒီမြေကို အစိုးရက မွတ်စလင်တွေကို ရောင်းထားတာပါ။ လူထုက လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒပြမနေဘဲ ဝက်သေမြှတ်လိုက်ကြတယ်။ အလုပ်ဖြစ်သတဲ့။
//////////In Seville Spain , local people foundaway to stop the construction of another mosque in their town. They buriedapig on the site, and made sure this would be known by the local press. The Islamic rules forbid the erecting ofaMosque on "pig soiled ground." The Muslims had to cancel the project. This land was sold to them by government officials. No protests were needed by the local people...and it worked!//////////////
Labels: ပဟေဠိအဖြေညှိ, သတင်းစုံ, အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုသည်မှာ
Labels: မူဆလင်အကြံ ၊ တို့လက်မခံ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်းစုံ, အစ္စလာမ်လုပ်ရပ်များ
True Lie မှ မေမေ့သမီးတစ်ဦးသို့ မေတ္တာစာ
ကိုယ့်ဘဝရဲ့သက်တမ်း ... တစ်ဝက်စာလောက်
နိုင်ငံကို ... ပစ်သွားပြီး တိုင်းတစ်ပါးမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူက ...
ကိုယ့်နိုင်ငံကို ... မတရားကျွန်ပြုသိမ်းပိုက်သွားတဲ့
နိုင်ငံသားကို ... လင်တော်ခဲ့တဲ့သူက ...
မျိုးမစစ်လေးတွေမွေးလာလို့ ... ငါးမူးဖိုးရောခံရပြီး …
ထပ်မွေးလာမယ့် ... အရောအနှောတွေမှာလည်း ...
မြန်မာ့သွေး ဆယ်ပြားဖိုးတောင် ... ပါမလာနိုင်တော့တဲ့အထိ …
မျိုးရိုးဂုဏ်ကို ... အထိန်းအသိမ်းကောင်းခဲ့တဲ့သူကြီးက ...
ဒီနိုင်ငံက ... တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အကြောင်းကို
အကျွမ်းတဝင်မရှိသလို ... နားလည်ခံစားမှုမရှိဘဲ …
အလေးနက်ထား ... မဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့သူက ...
မိဘဘိုးဘွားတွေ နဲ့ တိုင်းရင်းသားအများစု ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီး …
ခေတ်အဆက်ဆက်က ... ရောင်ဝါထွန်ုလင်းတောက်ပလာခဲ့တဲ့ … ဗုဒ္ဒဘာသာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ... ကျွန်မသိပ်နားမလည်လို့ပါ ဆိုပြီး ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စွာ ... လူသိရှင်ကြား ပြောရဲခဲ့တဲ့သူက ...
ကိုယ့်ဘာသာကို ရစရာမရှိအောင် ... ချနင်းနေတဲ့အချိန် … ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ ...
ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ ရက်ရက်စက်စက် နဲ့ ... သတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အချိန် …တွေမှာ
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ... နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တဲ့သူက ...
မွတ်ကုလားကိုကြတော့ ... ရိုက်ဖို့ သတ်ဖို့ မပြောနဲ့ …
ကုလားလို့ခေါ်မိတာလေးနဲ့တင် ... ဆတ်ဆတ်ထိမခံတတ်ဘဲ …
ကိုယ်လူမျိုးတွေကို .... မိမဆုံးမဖမဆုံးမတွေလို့ ပြောရက်ခဲ့သူက ...
ကိုယ့်ကို ဆန့်ကျင်တယ် ၊ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့
ထင်လာတာနဲ့ ... အမျိုးဘာသာ သာသနာကို မငဲ့ကွက်တော့ဘဲ …
အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို ... ဘယ်တော့မှ လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ …
အမြှော်အမြင်မရှိ ... မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ပြောရဲခဲ့တဲ့သူက ...
သမ္မတ ... လုပ်ချင်တယ် ဟုတ်လား ...
သူ့လိုမ်ိန်းမျိုးကို ... သမ္မတ ... ဖြစ်စေချင်တယ် ဟုတ်လား …
ရူးနေကြလားဗျာ ... တစ်ကယ်ကို ပဲ
အသိဥာဏ်တွေ ၊ ဆင်ခြင်တုံတရားတွေ ... နုံ့နဲသွားကြတာလား …
ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကို ... သွားမေးကြစမ်းပါ …
မင်းတို့နိုင်ငံအတွက် ... ဒီလိုအရည်အချင်းမျိုးရှိတဲ့
သမ္မတ .... မျိုးကို ရွေးကြမှာလားလို့ ...
တစ်ရာခိုင်နှုန်းတောင် ... ထောက်ခံမဲရမှာမဟုတ်ဘူး …
သူဖူးဖူးမှုတ်နေတဲ့ ... မွတ်ကုလားတွေနိုင်ငံဆိုရင်တော့ ...
လည်လှီးပြီး အပိုင်းပိုင်းခုတ်လွှတ်လိုက်လို့ ... ဆွမ်းသွတ်စရာ
အသားစတောင်... ရအောင်ကောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ...
ဒါ့ကြောင့်ပြောပါတယ် ... ရူးနေကြတာလား ...
တစ်ကယ်ကို ပဲ အသိဥာဏ်တွေ ၊ ဆင်ခြင်တုံတရားတွေ ...
နုံ့နဲသွားကြတာလား ... လို့ ... ။
မဆင်မခြင်ဘဲ့တိုက်တာ .. နောက်ဆုံးးပြည်သူကဝိုင်းအော်မှဘဲ
အရှက်မရှိ ... လွှတ်တော်တက်လာတယ် ... ၊
ရခိုင်မှာ အများဆုံးနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဒုတိယအများဆုံး
ကုလားတွေကို လူနည်းစုပါဆိုပြီး သမိုင်းမကျေဘဲ အမူပိုခဲ့တာ
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ... ညီညွတ်ရေးမပြောနဲ့
မောင်နှမချင်းတောင် အမွေအတွက် နပန်းဖက်လုံးမတတ်ဖြစ်နေတာ
ကိုယ့်ပါတီထဲမှာလည်း ... အလဲလဲအကွဲကွဲ အပြဲပြဲ ဖြစ်နေတာ
ရုရှားသမ္မတဖမ်းထားတဲ့ ... အဆိုတော်အဖွဲ့လွှတ်ပေးဖို့
မလေးရှားက .. . မြန်မာတွေအသတ်ခံရတော့ ...
အသေကောင်အတိုင်းဘဲ ... နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တာ ...
ကျွန်မက လွှတ်တော်ထဲမှာနေပြီး ... ပြင်ချင်တာ လို့ပြောပြီး
အဏာမရှိလို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး ... ဒါ့ကြောင့်အာဏာပေးပါဆိုပြီး
မြန်မာပြည်ကို ... တိုးတက်ကြီးပွါးအောင်လုပ်ဖို့မပြောနဲ့
ဒီလှိုင်းလို ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုတောင် အရှုံးပြပြီး ပိတ်သိမ်းသွားအောင်
ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ... အံဖွယ် စီမံကွပ်ကဲမှုအရည်အချင်း တွေ
ခြေဥမှာ တိုင်းရင်းသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို အတားဆီးဖြစ်နေတဲ့
တပ်မတော်ပါဝင်မှုတွေကို အဓိကပြင်ခြင်တာပါလို့ စအော်လာခဲ့ပြီး
၅၉ (စ) ပြင်ဖို့ပဲ တဆာဆာအော်နေ တာအပြင် ...
သူမျိုးမစောင့်ခဲ့တာကို ... ထမင်းစားရေသောက်သဘောမျိုး
လက်ခံလာကြအောင် ... နိုင်ငံသားဥပဒေကိုပါ
ခြေဥမပြင်ရင် ... သပိတ်မှောက်မယ် ပြောလိုက်
ပြင်ပြင်မပြင်ပြင် ... ဝင်ပြိုင်မယ်ပြောလိုက် ... စုံလို့ပါပဲ
ရူးချက် .. နှမ်းချက် ... လွတ်ချက် ... ဥာဏ်မဲ့ချက် ...
ပြောမကုန်နိုင်ပါဘူး ... ကလေးမရေ ...
ဒီလို အရူးဖင်သရဲလုပ်ခံရသလို ... ဗရမ်းဗတာဖြစ်နေတဲ့
မယ်ကြီးအိုကြီးက ... သမ္မတဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လား ... ရူးနေလား ၊
နင်သိအောင်ထပ်ပြောလိုက်မယ် ... နင့်ရဲ့အမယ်အိုကြီးက
နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးလိုက်ပြီး အရူးမီးဝိုင်းသလို ...
ခြေဥပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတာ ... ထောက်ခံမှုရာနှုန်းပြည့်ရတယ်ဆိုပြီး
ပလတ်ကျွတ်ပြီး ... အောင်ပွဲခံကြွေးကြော်နေတာ .. ဥာဏ်မဲ့တာပဲ
ဘာ့ကြာင့်လည်းဆိုတော့ ... အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့
(၃)သိန်းကျော်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ...
စီစစ်ဖို့ ဆွေးနွေးဖို့ အကြံပြုဖို့ လွှတ်တော်တင်ဖို့ အကြံပြုဖို့ ..
ဝှူးမောလိုက်တာ ... ဒါတွေပြီးဖို့ ... အမယ်အိုကြီး အသက်မီပါ့မလား
ငါ့အထင်ပြောရရင် ... အဲဒီ (၃) သိန်းမှာ ...
လက်ရှိအစိုးရက ... အကုန်လုံးနီးပါးများ ... ရေးတင်လိုက်တာများလား ...
ဖြစ်ဖို့များတယ် ... နော် ... အဟွန်း .. ဟွန်း .. ပါးပါးလေးပါ ၊
နင်တစ်ခုပဲဆုတောင်းရမှာက ... သမ္မတ မဖြစ်တော့လို့
သွက်ချာပါဒလိုက်သွားမယ့် ... အမယ်အိုကြီးကျမ္မာရေးကောင်းဖို့ပါပဲ ...
ဒီတော့ လမ်းထွက်မယ့်အစား ... အခုကတည်းက
ဘုရားတရားလုပ်တော့ ကလေးမရေ ... ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ပေါ့ ... ။
Labels: မှန်ပြောင်းများ, ယဉ်ကျေးမှုဆိုသည်မှာ, ရယ်စရာမောစရာ, အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် သမိုင်း
မလေးရှားနိုင်ငံသည် အရှတိုက်၏အရှေ့တောင်ဘက်အစွန်းထိပ်နှင့် ဘော်နီယိုခေါ် ကာလီမာ တန်ကျွန်း၏ မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် တောင် ဘက်ခြမ်းတွင် အင်ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံတို့နှင့် နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ချင်းကပ်လျှက်တည်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ၏အကျယ် အ၀န်းမှာ စတုရန်းမိုင် (၁၂၇၃၁၆) ကျယ်ဝန်းပြီး။နိုင်ငံ၏မြို့တော်မှာ “ကွာလာလမ်ပူ”ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၂ ခုနှ စ်ဇူလိုင်လတွင် ကောက်ခံထားသည့်မှတ်းတမ်းများအရ လူဦးရေမှာ ၂၂.၂သန်းရှိပါသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ နောက်ခံသမိုင်းရာဇ၀င်မှာ တရုပ်နွယ်များမှဆင်းသက်လာကြခြင်း ဖြစ်ကြောင့်လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ B.C,1500,2000 .ခန့်တွင် တရုပ်ပြည်၊ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းမှ မွန်ဂိုနွယ် ဖွားတရုပ်များသည် မလေးကျွန်းဆွယ်ရှိ ကျွန်းစုများသို့ ရောက်ရှိအခြေချခဲ့သည်မှ မလေးနိုင်ငံသည်စ တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမိန်ဂိုတရုပ်များသည် မလေးကျွန်းစွယ်ကို မလက္ကာမြို့ပြတည်ထောင်၍ အုပ် ချုပ်ခဲ့ကြသည့်၊ ထိုသို့မလက္ကာမြိုကပြတည်ထောင်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည့် ဘုရင်တို့အားလည်း မလ က္ကာဘုရင်များဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြ၏။ ထိုအချိန်ကာလကို မလေးကျွန်းစွယ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံဟု အမည် မတွင်းသေးချေ၊ “မလ္လာယုနိုင်ငံတော်”ဟုသာ အမည်တွင်ခဲ့လေ၏။
မလ္လာယုနိုင်ငံခေါ် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် B.C, 309, ဘုရားရှင်တော်မြတ် ပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူပြီးနှစ်ပေါင်း (၂၅၀)အကြာ တတိယင်္ဂါယနာတင်ပြီးချိန်မှ စတင်၍ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ထိုမလေးကျွန်းစွယ်ကိုလည်း သုဝဏ္ဏဘူမိဒေသတွင်ပါဝင်ကြောင်းကို ပညာရှင်တို့က ယူဆကြပါသည်။ တိကျခိုင်လုံသောသမိုင်းအထောက်အထားများအရ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သာသနာနှစ် (၉၀၀) နှင် (၁၀၀၀)အတွင်း ခရစ်နှစ်၎-ရာစုနှင့် ၅-ရာစုတွင်း အိန္ဒိယ၌အသုံးပြုသောသက္ကတဘာသာဖြင့်ရေးထိုး သည့်သောဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကျောက်ချပ်များစွာတို့ကို မလေးရှားနိုင်ငံအနှံ့တွင်တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့အပြင် အဘိဓမ္မာကျမ်းမှ ဂါထာတော် သုံးပုဒ်အား ရေးထိုးထားသည့် ရွှံ့အုတ်ချပ်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပြီး၊ အုတ်ကျောင်းတိုက်၃-တိုက်နှင့် စေတီတော် (၅)ဆူကို ဘုရင်နှင့် သံဃာတော်များကြီးမှု၍ ပြည်သူ၊ပြည်သား၊ဒကာ၊ဒကာမအများစုပေါင်းကာလှုဒါန်းတည်ဆောက်ထားခဲ့ကြကြောင်း ရေးထိုး ထားသည့် ကမ္ဗည်းမော်ကွန်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါသည်။ နခွန်ရှရီဓမ္မရာဇ် ခေါ် နခွန်ရှရီ တမ္မရတ် ဘွဲ့တော်ရှိသည့် စေတီတော်ကြီးကိုလည်းတွေပရှိရသဖြင့် ခရစ်နှစ်(၅)ရာစုခန့်ကပင် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရောက်ရှိပြန့်ပွားနေပြီး နေလိုလလိုထွန်းပခဲ့ကြောင်း သိရှိရပေသည်။
ရှေ့အခေါ်သီရိဝိဇယနိုင်ငံ ယခုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ခရစ်နှစ်(၇)ရာစုတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်း လင်းအားကောင်းသည့် ဗုဒ္ဓနိုင်ငံတော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ မလေးရှားကျွန်းစွယ်များသို့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပြန့် ပွား အောင် ထောက်ပန့်ခဲ့၏။ တရုပ်သုတေသီရဟန်းတော် အီချင်း၏ (၇)ရာစုကုန်ခါနီး သွားရောက်ခဲ့သည့် သီရိဝိဇယနိုင်ငံခရီးသွားမှတ်တမ်းတွင် “သီရိဝိဇယ (ခ) အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်လွန်စွာ ထွန်းကားနေပြီး ရေမြေဆက်စပ်လျှက်ရှိသည့် မလ္လာယုကျွန်း (ခ) မလေးရှားနိုင်ငံစသော နိုင်ငံများသို့ လည်း ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဖြန့်ဝေပေးနေပြီး” ထေရ၀ါဒကိုအဓိကထားလက်ခံကျင့်သုံနေပြီး မဟာယာန ၀ါဒအနည်းငယ်ရှိကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
မလ္လာယုကျွန်းခေါ် မလေးရှားနိုင်ငံသည် မူဆလင်တို့အတင်းအဓမ္မဘာသာရေး မတိုက်ခိုက် မသိမ်းပိုက်မှီအချိန်များတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားမှုမှာလွန်စွာအားကောင်းလေ၏။ မလ္လာယုဘုရင်ကိုယ်တိုင်ပင် ၀ိနည်းတော်ကိုနားလည်တတ်ကျွမ်းလို၍ သင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့ခြင်း ကိုထောက်ရှု၍ မလေးတွင် ဘုရင်နှင့် ပြည်သူ၊ပြည်သားတို့၏ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အား ကြည်ညို ထောက်ပန့်မှုကို သိရှိနားလည်ခန့်မှန်းနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ပုဂံပြည်ခေါ် မြန်မာနှင့် မလ္လာယုကျွန်းခေါ် မလေးရှားနိုင်ငံ တို့အကြားဘာသာရေးဆက်နွှယ်မှုများကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
A.D,11. ရာစုခန့်တွင် ပုဂံနေပြည်တော်မှ သီဟိုဠ်တွင်ပရိယတ္တိပညာများသင်ကြားခဲ့သည့် “အရှင်ဆပ္ပဒမထေရ်”သည် (၁၀)၀ါအရတွင် ပုဂံနေပြည်တော်သို့ပြည်လည်ကြွချီတော်မူလာပြီး သီဟိုဠ် မှ “အရှင်သီဝလိ၊အရှင်တာမလိန္ဒ၊အရှင်အာနန္ဒာ၊ အရှင်ရာဟုလာ”ဟူသောမထေရ်လေးပါးကို ပုဂံနေ ပြည်တော်သို့ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါသည်၊ နောက်တွင်အရှင်ရာဟုလာသည် ပုဂံနေပြည်တော်မှ မလ္လာယုကျွန်း မလေးရှားသို့ကြွရောက်ပြီး ၀ိနည်းတရားတော်ကိုတတ်သိနားလည်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြနေသော မလ္လာယု ဘုရင်အား ခုဒ္ဒသိက္ခာဝိနည်းကျမ်းကို အဖွင့်ဋီကာကျမ်းနှင့်တကွသင်ပေးခဲ့၏။ ထိုမလ္လာယုဘုရင်သည် ၀ိနည်းကျမ်းတော်သင်ပေးသည့် မိမိဆရာအရှင်ရာဟုလာအား ပတ္တမြားသပိတ်တော်ကိုလှုဒါန်လေ၏။ ထိုမလ္လာယုဘုရင်ဝိနည်းတော်သိကြားနေချိန်တွင် ပုဂံနေပြည်တော်တွင် နရပတိစည်သူမင်းကြီး ထီးနန်းစံတော်မူနေချိန်သာသနာတော်နှစ်(၁၇၀၀)ခန့်တွင်ဖြစ်ပါသည်။
A.D,15 ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်အာရတ်နွယ်ဖွား မူဆလင်တို့သည် ကုန်သွယ်ခြင်းအကြောင်းပြ ချက်ဖြင့် ထိုမလ္လာယုကျွန်းနှင့် သီရိဝိဇယနိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာကြပြီး၊အစပိုင်တွင် မူဆ လင်တို့သည် ဒေသခံဗုဒ္ဓဘာသာတို့အား အလျှော့ပေါင်းသင်းကာ သဘောထားပြည့်သရောင် အယော င်ဆောင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရင်နှင့် ဘုရင်နှင့်နီးစပ်သူများအား ပေါင်းသင်း၍ ၄င်းတို့မျက်နှာရအောင် အား ထုတ်ကြပြီး၊ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ၄င်းတို့အရာရောက်လာကြသည့်အခါ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အား သွေးခွဲခြင်း၊ သွေးထိုးခြင်းများပြုလုပ်၍၊ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုကုန်သည်များမှ မူဆလင်တို့အား အလုံးအရင်းဖြင့်ခေါ် ယူ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်များဖြစ်ကြသည့် သီရိဝိဇယနိုင်ငံ(အင်ဒို) နှင့် မလ္လာယုကျွန်းဂမလေး)တို့ကို စစ်တိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြ၏။ သတိလက်လွတ်ကြောင့်ကြမဲ့နေကြသော ဗုဒ္ဓဘာသာတို့မှာ မူဆလင် တို့၏ ဓါးဖျားဝယ် မရှုမလှအသတ်ခံကြရ၏။
ဒေသခံဗုဒ္ဓဘာသာသမီးမျိုတို့အား မူဆလင်တယောက်လျှင် အနည်းဆုံးလေးယောက်ယူ၍ မူဆလင်ဦးရေးများပွားစေရန်သားဖောက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ကြ၏။ မူဆလင်ဦးရေများပြားလာသောအ ခါ အာဏာပိုင်ဘုရင်မှာလည်း မူဆလင်ဘုရင်ဖြစ်လာကာ နောက်ဆုံး မလ္လာယုကျွန်းတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ တော်မှာ ကွယ်ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ယနေ့မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် အဓိက ကျားကန်ပေးထား သည် မှာတရုပ်နွယ်ဖွားများပင်ဖြစ်ပါသည်။မလေးအစိုးရသည် ရှေ့ဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦးတို့အား အစဖျောက်ချင်ကြ၏၊သို့သော်တရုပ်တို့မှ ကမ္ဘာယဉ်းကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲစသည်တို့နှင့် ပူပေါင်း ကာ မလေးတို့မဖျက်ဆီးနိုင်အောင် လူအား၊ငွေအားတို့ဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားကြပါသည်။ တရုပ်တို့သည်ဗုဒ္ဓနေ့ ကဆုန်လပြည့်(မေလ)နှင့် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့တို့ကို ရုံပိတ်ရက်များအဖြစ်သတ် မှတ်ထားကြပြီး ညအခါတွင် ရောင်စုံမီးပန်းများထွန်းညှိ၍ ဘုရားအပူဇော်ခံ လှည့်လည်လေ့ရှိကြပါ သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသည် (State Religion) အဖြစ် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ မှတ်တမ်းများအရ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူ ၃၂% ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း ထိုအ ထဲတွင်တာအိုး၊ကွန်ဖြူရှပ်စသည့်တို့ကိုပါ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်၏။ အမှန်တကယ် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာည ၁၇.၃% ရာခိုင်နှုန်းသာရှိ၏။ မလေးရှားနိုင်ငံသည် တချိန်တခါက ဗုဒ္ဓသာသနာတော် မည်မျှထွန်းကားခဲ့ကြောင်းကို မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ၀ိသေသအထူးပြုနာမည်ဖြစ်သည့် “ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီ တော်များနှင့် မူဆလင်ဗလီများ ပေါများသောနိုင်ငံ (The Land of Mosques and Pagoga ) “ကိုထောက်ရှု၍သိနိုင်ပေသည်။ (ဗလီများသည် နောက်မှသာတည်ဆောက်ခြင်းသာဖြစ်)
မူဆလင်တို့၏ အစ္စလာမ်ဘာသာချဲ့ထွင်ခြင်းမှာ “ဘာသာတရား၏အဆုံးအမ၊ အစ္စလာမ်ဝါဒ များကို ဟောပြောခြင်းဖြင့် ချဲ့ထွင်ခြင်းမဟုတ်ပဲ ဘာသာတရားတခုနှင့် မည်သို့မှမသက်ဆိုင်သည့် ချဲ့ ထွင်ခြင်းမျိုးဖြင့် ချဲပထွင်းကြခြင်းဖြစ်၏။” မူဆလင်တို့သည် စစ်တိုက်၍၄င်း၊ မယားမြောက်များစွာယူပြီး သားဖောက်၍၄င်း၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များတိုးပွားအောင် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။ ယခုလိုဒီမိုကရေစီ ခေတ်ကာလတွင်မူ ရှေ့ကကဲ့သို့မူဆလင်တို့သည် စစ်တိုက်၍ ဘာသာပြန့်ပွားအောင်လုပ်ဆောင် ၍မရေ တာ့ချေ၊ ( အယ်(လ်)ကိုက်ဒါး ကဲ့သို့သောမူဆလင်တို့ကား ၄င်းမူဝါဒကိုပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေဆဲဖြစ်) ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီကိုခုတုံးလုပ်၍ အစ္စလာမ်ဘာသာတိုးပွားအောင်လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ သားဖောက်သာသနာပြုနည်းကိုကားယခုထက်တိုင်ကျင့်သုံးလျှက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မူဆလင်တို့သည် ခေတ်ကာလမကောင်းသည့်အခါ ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နေ၍ ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် များနှင့် မဏာသင့်အောင်ပေါင်းသင်းပြီး ခေတ်ကာလကောင်းသည့်အခါတွင်မူ အခွင့်အရေးကိုဦးဆုံး ယူတတ်ကြပါသည်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းကိုအသာထားလို့ မြန်မာ့သမိုင်းလောက်ကိုပင် လေ့လာကြည့်မည်ဆို ပါက မူဆလင်တို့၏ သဘောကိုကောင်းစွာရိပ်မိလာကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေး မရမီက မူဆလင်တို့သည် နယ်ချဲ့တို့နှင့် သင့်မြတ်အောင်ပေါင်း၍ အိမ်ရှင်မြန်မာတို့အား ဒုက္ခပေးခဲ့ ကြပြီး မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရသည့်အခါတွင်လည်း ၄င်းတို့မှ ဦးစွာအခွင့်အရေးယူခဲ့ကြပေသည်။ မြန်မာပြည်သည် ၁၉၄၈-ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ-၄-ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်ရေးရ၏ လွတ်လပ်ရေးရ၍ ရက်ပိုင်း မျှသာရှိတဲ့သည့်အချိန်တွင် မူဆလင်နယ်ချဲ့ ဘင်္ဂါလီ “မူဂျာဟစ်”သူပုန်တို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အား သိမ်းပိုက်ရန် ဂျီဟတ်စစ်ပွဲဆင်နွဲကာ အခွင့်အရေးလက်တဆုံးယူခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ လွတ်လပ် ရေးအား အကာအကွယ်ယူအသုံးချခဲ့ကြလေ၏။
စစ်အာဏာရှင်ခေတ်တွင်လည်း မူဆလင်တို့သည် ထိုအာဏာရှင်များနှင့်ပေါင်း၍ မြန်မာတိုင်း ရင်းသား၊တိုင်းရင်သူများအား စိတ်တိုင်းကျစော်ကားအနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့အနိုင်ကျင့်ခံ တိုင်း ရင်းသားတို့မှာ အာဏာရှင်များအားသွားရောက်တိုင်ကြားပါကလည်း မူဆလင်ငွေကြေး သြဇာခံဖြစ် နေသည့် အာဏာပိုင်တို့မှာ မည်သည့်အရေးယူမှုမျှမလုပ်သဖြင့် မြန်မာတို့မှာ ကုလားစော်ကား အနိုင် ကျင့်သမျှ အံ့ကျိတ်ခံခဲ့ရရှာပါသည်။
ယခုမျက်မှောက်အချိန်တွင်မူလည်းအားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း ခရစ်နှစ်(၂၀၁၀)တွင် ရွေးေ ကာက်ပွပြုလုပ်၍ (၂၀၁၁)ခုနှစ်တွင် ဒီမိုကရေစီအနည်းငယ်ပုံပေါ်၍ ရုပ်လုံးပေါ်လာသည့် (၂၀၁၂)တွင် ၄င်းမူဆလင်တို့သည် ဒီမိုကရေစီအားခုတုံးလုပ် အခွင့်အရေးယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်မြေ၊ဘာသာ၊ သာသနာ၊လူမျိုးတို့အား စော်ကားကျူးကျော်ကြလေ၏။ ယခုတကြိမ်တွင်မူ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ထက်ပို ၍ဆိုး ၀ါးလေ၏ ၊၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသာ ဂျီဟတ်လုပ်ရန်စကျူကျော်နိုင်ခဲ့ ရာ၊ ယခုမူ တနိုင်ငံ လုံးအတိုင်းအတိုင်ဖြင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ အချိတ်အဆက်မိမိဖြင့် ကျူးကျော်စော်ကားလာကြသည် ကိုတွေ့မြင်ရပေသည်။ထိုသို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတိုင်ဖြင့် ရန်စကျူကျော်ရဲကြသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အာဏာရအဖွဲ့အစည်းနှင့် အတိုင်းအခံ အဖွဲ့အစည်းအကြား အမြတ်ထုတ်အပြစ်ပုံချမှုများ သည်လည်း တခုအပါအ၀င်ဖြစ်၏။
ပြဿနာဖြစ်ခြင်း၏ဇစ်မြစ်အကြောင်းရင်းတိုင်းမှာ အိမ်ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာများမှ ရန်စခြင်းကြောင့်မ ဟုတ်ပဲ၊ ဧည့်သည်မူဆလင်များ၏ အကွက်ကျကျစီစဉ်ပြဿနာရှာရန်စမှုများကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။ ထိုသို့ မူဆလင်များမှရန်စသည့်အခါတွင် အတိုက်အခံများမှ မသိသယောင်နေတတ်ကြပေမဲ့လည်း၊ အနိုင် ကျင့် စော်ကားခံရသည့် အမိတိုင်းရင်းသားများမှ ပြန်လည်ခုခံကာကွယ်ကြသည့်အခါမှ အသံ ထွက် လာကြ သည်မှာလည်း တကြိမ်မကတော့ခြင်းကြောင့် တိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ချေ၊ ထိုသို့အတိုက် အခံများ၏ ခုခံကာကွယ်ပြောဆိုမှုများသည်လည်း မူဆလင်တို့၏ရန်စစော်ကားမှုကို အပြစ်မရှိသကဲ့ သို့ဖြစ်ပြီး၊မူဆ လင်တို့အား ရန်စနိုင်စေရန် အခွင့်အရေးပေးနေသကဲ့သို့ဖြစ်စေပါသည်။ဒီအချက်ကို အတိုက်အခံများ အနေဖြင့် ကောင်းစွာနားလည်သဘောက်ထားဖို့လိုပါသည်။ သမိုင်းတရားခံအမျိုး သားရေး သစ္စာ ဖော က်၊သူခိုးဓါးရိုးကမ်းမဖြစ်စေရန် နှစ်ဖက်လုံးက အထူးသတိထား ဆင်ခြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား ရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် တဖွဲ့တဖွဲ့အပြစ်ပုံချ၊ချောက်တွန်းကာမနေကြပဲ နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံးရေးနှင့်၊ အမျိုးဘာသာ၊သာသနာတော် အရှည်ခန့် တည်တံ့ရေးအတွက် လက်တွဲညီညာစွာဆောင်ရွက်သင့် ကြပါသည်။
အချို့သောသူတို့သည် “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မူဆလင်တွေကမတရားသောနည်းဖြင့် ၀ါမျိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ အခြေအမြစ်မရှိပါဘူး၊ အစိုးရိမ်လွန်နေကြတာပါ”ဟု သမိုင်းကိုမလေ့လာကြပဲ ပြောဆိုနေကြသည်ကို ကြားနေတွေ့နေရပါသည်။ တချိန်တခါကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီး များဖြစ် ကြတဲ့၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊ပါကစ္စတန်၊အီရတ်၊အီရန်၊ဆီးဒီယား၊ဂျော်ဒန်၊အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှား၊မလေးရှားနှင့် ကရှိမီးယားဒေသတို့ကို မူဆလင်တို့အတင်းအဓမ္မ၀ါးမျိုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်မှာ သမိုင်းမှတ်တမ်းများ နှင့် အဆောက်အဦးဟောင်းတို့ကိုက သက်သေခံလျှက်ရှိပါသည်။ထိုသို့မူဆလင်များမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုဝါးမျိုခဲ့သည်မှာ အစ္စလာမ်ဝါဒကို ထိုသမိုင်းသက်သေများကို မလေ့လာကြပဲ တတ်သိနား လည်အရှ ည်တွေးသူတို့၏ သတိပေးစကားကို မနာခံ၊မလိုက်နာသူတို့သာ အသိတရားကင်း စုံလုံးကန်းများသာ ဖြစ်၏။
တချိန်တခါက ကမ္ဘာမှာ ၁၀-ပုံပုံလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ၈-ပုံနီးပါးခန့်ရှိခဲ့ပြီး၊ ယခုမူပြောင်းပြန် ဖြစ်၍သွားချေ၏။ ထိုသို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများဝါးမျိုခံရခြင်းမှာ မူဆလင်ဘာသာ၏ဘာသာတရားကို သဘောကျကြိုက်နှစ်သက်၍ ဘာသာပြောင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ၊ အတင်းအဓမ္မတိမ်းသွင်း ခြင်းေ ကြာင့်ပင်ဖြစ်၏။ မူဆလင်များသည် ခရစ်ယာန်နိုင်ငံတို့အားမ၀ါးမျိုနိုင်ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများကိုသာ ၀ါးမျိုနိုင်ကြသည်မှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ခန္တီတရားနှင့် ပျော့ညံ့ခြင်းကို မကွဲပြားခြင်း၊ ဗုဒ္ဓတရား တော်နှင့်အညီ အချင်းချင်းစည်းလုံးတိုင်ပင်ညီညွှတ်စွာ ဣဿာ၊မစ္ဆရိယကင်းကင်းဖြင့် မနေခဲ့ကြ၍ မူဆလင်တို့၏ အလွယ်တကူ သွေးခွဲဝါမျိုးခြင်းကိုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင်လည်း မူဆလင်တို့သည် မြန်မာအမျိုးသမီးတို့အားနည်းမျိုးစုံဖြင့်စော်ကား အနိုင်ကျင့်နေသည်မှာလည်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုပင်ဖြစ်၏။ မူဆလင်တို့သည် အမိမြန်မာပြည်အား ၀ါမျိုရန်အတွက်အကွက်ကျကျ၊ အစီအစဉ်တကျလုပ်ဆောင်နေသည်မှာ သေခြာလေ့လာကြည့်သူ တိုင်းသိမြင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။မူဆလင်တို့သည် အကြမ်းဖက်ခြင်း၊တိုင်းရင်သူတို့အား သိမ်းပိုက် ယူခြင်းဖြင့်ဝါးမျိုနေရုံမကပဲ၊ အတွင်းကလှိုက်စား၍ ၀ါးမျိုးနေပြီဖြစ်သည်။
အာဏာရှိပါတီများ၊ ပါဝါရှိ ပါတီများတို့အားအတွင်းလူအဖြစ်ပူကပ်၍ သွေးခွဲနေကြပေ၏။ သစ်ပင်တပင်တွင် သစ်ရွက်သစ်ကိုင်း များတွင်ကျရောက်နေသော ပိုးပွားများကို အလွယ်တကူနှိမ်နှင်းလို့ရပေမဲ့လည်း ၊ အတွင်းအမြစ်ပိုင်း လူမမြင်နိုင်ရာနေရာတွင် ပိုးကျနေပါက သတိမထားကြမိတော့ပဲ နောက်ဆုံး အပင်ဗုန်းဗုန်းလဲမှသာ သတိထားမိကြလေ့ရှိပါသည်။ ထိုအတူမူဆလင်တို့သည် ယခုအခါ အတွင်းအမြစ်များမှ တွယ်ကပ် လျှက် ၀ါးမျိုဖျက်ဆီးနေကြလေပြီ၊ ထိုအမြစ်ကိုဖျက်ဆီးနေခြင်းသည် အကိုင်း၊အရွက်ထက်ပို၍ အန္တရာယ်များသလို၊တွေ့မြင်ရန်၊နှိုမ်နှင်းရန်လည်း များစွာခက်ခဲလှပါသည့်၊ထို့ကြောင့် အဖျက်ပိုးများ အားမကောင်းခင် တရားဥပဒေနှင့်အညီ ပြတ်ပြတ်သားသား ပေါင်းစုအားဖြင့်အမြစ်ပြတ်အောင် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားသင့်လှပါသည်။
Labels: သကျယဉ်ကျေးမှု, အစ္စလာမ်လုပ်ရပ်များ
Labels: ယဉ်ကျေးမှုဆိုသည်မှာ, သတင်းစုံ, အစ္စလာမ်လုပ်ရပ်များ, အမျိုးသမီးနှင့်မူဆလင်
ဖန်ဆင်းရှင် ရှိနိုင်/မရှိနိုင်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာမှတပါး ကျန်ဘာသာအားလုံးနီးပါးဟာ ဖန်ဆင်းရှင် နတ်ဘုရား(လူသားဘုရားမဟုတ်)ကို လက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဘာသာအားလုံးကို ခြုံငုံပြောရလျှင် ဖန်ဆင်းရှင်များဟာ ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံက ငွေကြေးဈေးကွက်လို အလွန်ဖောင်းပွနေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဟိန္ဒူမှာ ဗြဟ္မာ၊ ဂျူးမှာ ဂျစ်ဟိုးဗာ(ယေဟိုးဝါ)၊ ခရစ်မှာ ဂေါ့ဒ်၊ အစ္စလာမ်မှာ အလ္လာဟ်ဆိုပြီးတော့ ဖန်ဆင်းရှင် ကိုယ်စီ ရှိ ကြပါတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးဦးက အမှန်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ကျန် ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒအားလုံးဟာ အလိမ် အညာတွေချည်း ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် ဖန်ဆင်းရှင် ဘာသာဝင်တွေဟာ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် မှားတယ်လို့ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်ရဲကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ ဟာ ဘ၀တူ ဖြစ်နေကြလို့ပါပဲ။ တခါတရံ သူတို့ဟာ ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးတည်းကိုပဲ နာမည် အမျိုး မျိုး တပ်ပြီး ကိုးကွယ်နေကြသလိုလို ပြောဆိုနေကြတာကိုလည်း ကြားရဖူးပါတယ်။
ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးတည်းကို နာမည်ပြောင်းပြီး ကိုးကွယ်တာပါလို့လည်း သူတို့ ၀န်မခံကြပါ ဘူး။ အကြောင်းကတော့ နောက်မှပေါ်တဲ့ ခရစ်ယာန်နှင့်,အစ္စလာမ်တို့ဟာ ဟိန္ဒူနှင့် ဂျူးဖန်ဆင်းရှင် ယေဟောဝါ တို့ကိုပဲ နာမည်ပြောင်းပြီး ကိုးကွယ်နေရသလို ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ သမိုင်းကြောင်းမရှိတဲ့အတွက် မသေချာ မရေရာတဲ့ ဟောပြောချက်တွေကိုပဲ စမ်းတ၀ါးဝါနဲ့ လက်ခံယုံကြည်နေရရှာပါတယ်။
ဤကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးဦးက ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ လက်မခံကြပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကို လေ့လာလိုက်တဲ့အခါ “ဖန်ဆင်းရှင်က ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ အရိပ်အရောင် (သို့) သက်သေခံအထောက်အထား (သို့) သဲလွန်စ တစ်ခုမှ မတွေ့ရပါဘူး”လို့သာ သိပ္ပံပညာရှင် တွေ ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ဖန်ဆင်းရှင်က ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီဖန်ဆင်းရှင်ဟာ အဂတိ လိုက်စားတတ်ပါသလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ၎င်းဟာ လူတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကမ္ဘာမြေကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘက်လိုက်ပြီး မညီမမျှ ဖန်ဆင်းခဲ့လို့ပါပဲ။ ဖန်ဆင်းရှင် မဖန် ဆင်းခဲ့တဲ့ အခြားအခြားသော ဂြိုဟ်နက္ခတ်တာရာတွေ ဘီလျံပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် တွေ့ရှိ ရခြင်းဟာလည်း ဖန်ဆင်းရှင်ကို ပိုမိုသံသယရှိစေပါတယ်။ “အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်” ဆိုရင်လည်း လူအများ အငြင်းမပွားဖို့ အမှတ်အသားများ အထင်အရှား ချန်ထားခဲ့သင့်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရပ်များနဲ့ ယုတ္တိဗေဒများ အလွန်ပင်ထွန်းကားတဲ့ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ အလွန်ကျယ်ပြန့်နေတာဟာ အံ့သြစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြဟ္မာ(Brahma)၊ ယေဟိုးဝါ(Gehovah)၊ ဂေါ့ဒ်(God)၊ အလ္လာဟ်(Allah)-ဟူသော ကမ္ဘာကို ဖန်ဆင်းကြတဲ့ ဘုရားသခင်လေးဦးထဲတွင် တစ်ဦးဦးက အရင်ပေါ်ပြီး ကမ္ဘာကို ဖန်ဆင်း လိုက်ရင် ကျန်သုံးဦးအတွက် ဖန်ဆင်းစရာ ကျန်မှ ကျန်ပါဦးမလား? အရင်ပေါ်တဲ့ တစ်ဦးက (ပြိုင်ဘက်လို ချင်လို့) ကျန်သုံးဦးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တာလား? လေးဦးလုံး တပြိုင်နက်ပေါ်တယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အလုအယက်ဖန်ဆင်းပြီး ဒီဘုရားတွေ ရန်မဖြစ်ကြဘူးလား? ဒါမှမဟုတ် ဘုရားလေးပါးဟာ (ကွန်ဖရင့်) Conference လုပ်ပြီး ဝေပုံကျ ဖန်ဆင်းသွားတာလား? စသည်ဖြင့် မေးစရာ,တွေးစရာ ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အဖြေကိုတော့ ယခုထိ မသိရသေးပါဘူး။
အမေရိကန်နိုင်ငံ တင်နက်ဆီပြည်နယ်၊ မြို့တော်နက်ရှဗီးရဲ့ ဗန်ဒါဗစ်တက္ကသိုလ်မှာ ၁၉၈၇-ခု လောက်က (တစ်လနှစ်ကြိမ်)ကျင်းပခဲ့တဲ့ Multi-Creed Seminar လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (ဘာသာပေါင်းစုံ Conference) မှာ ဟိန္ဒူ, ဂျူး, ခရစ်ယာန် နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် တွေကို အထက်ပါအတိုင်း သီတဂူဆရာတော်က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါ ဂျူးဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက “သူတို့ရဲ့ ယေဟိုးဝါ ဘုရားသခင်က အရင်ဆုံး ပေါ်ခဲ့ တယ်”ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ-
သီတဂူ ။ ။ ဒါဆို အခြားဘုရားတွေ ဖန်ဆင်းဖို့ ချန်ထားခဲ့သေးလား? ဒါမှမဟုတ်ရင် နောက် ပေါ် ဘုရားတွေက ပထမဖန်ဆင်းပြီးသားကို Update(မွမ်းမံ) / Upgrade (အဆင့်မြှင့်) လုပ်တဲ့အနေနဲ့ ဖန်ဆင်းခဲ့တာလား?
ဂျူးဘုန်းကြီး ။ ။ “အဲဒါတော့ ကျုပ်လည်း မဖြေတတ်ဘူးဗျာ”
သီတဂူ ။ ။ “မဖြေတတ် ဖြေတတ်အောင်ဖြေကွာ၊ နောက်တစ်ပတ် ဆွေးနွေးပွဲမှာ မင်းရဲ့ အဖြေ ငါစောင့်မယ်”
သီတဂူ ။ ။ (ဂျူးဘုန်းကြီးကို) “မင်းအဖြေ ငါ စောင့်နေတုန်းပဲ” လို့ မေးလိုက်တယ်။
ဂျူးဘုန်းကြီး ။ ။ “ဆက်စောင့်ပါဦး” တဲ့။
သီတဂူဆရာတော်က ဆက်လက်အမိန့်ရှိပါတယ်။ “အမေရိကန်က ပြန်သာ လာခဲ့ရတာ အဲဒီ ဂျူးဘုန်းကြီးဆီက အဖြေမရခဲ့ဘူး” ဟူ၍။
လောကမှာ ဖန်ဆင်းရှင်လို့ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင် ရှိ/မရှိ ဆိုတာကိုတော့ ဘုရားသခင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား။
Labels: ပဟေဠိအဖြေညှိ, ရယ်စရာမောစရာ, ခေတ်သစ်အယူခေတ်သစ်ဝါဒ, ဆောင်းပါး
အစ္စလာမ် ဗလီများအား အင်ဂိုလာ အစိုးရ စတင်ဖျက်ဆီး
အင်ဂိုလာနိုင်ငံဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို တားမြစ်ဆန့်ကျင်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ ပထမဦးဆုံးသောနိုင်ငံအဖြစ် အခုလို ဗလီတွေကို ဖျက်စီးပစ်ခြင်းဖြင့် ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဘာသာရေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ http://www.onislam.net/ အတိအလင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် တရားရေးဝန်ကြီးဌာန မှထုတ်ပြန်သည့် နောက်ထပ် အမိန့် မထွက်မချင်း ဗလီတွေအားလုံး ပိတ်ထားရမှာဖြစ်တယ် ဟု အင်ဂိုလာ ယဉ်ကျေးမူ့ ဝန်ကြီး ရိုဆာ ခရုဇ် ဆီလ်ဗာက နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက် သောကြာနေ့ ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဝန်ကြီးက အင်ဂိုလာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမူ့ဓလေ့ ထုံးစံနဲ့ ဆန့် ကျင်တဲ့ ဒီလိုဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကို အလျော့မပေးပဲ မဖြစ်မနေ ဖျက်စီးပြစ်ရမှာဖြစ်တယ် လို့ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
အင်ဂိုလာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ကလည်း ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းမှ “ အစ္စလာမ်အယူဝါဒ ဆိုတာဟာ လိုရာဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေ တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ၊ ဘာသာတရား တစ်ခုအဖြစ် ၎င်းတို့အနေဖြင့် လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါကြောင်း ” တရားဝင် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ လုအန်ဒမြို့တော်ရှိ ဗလီနှစ်လုံးကိုလည်း ဖျက်သိမ်းရန် အမိန့်ရထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြို့တော်ဝန်ကပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရှိ “ ခွေးလို ဝက်လို သားပေါက်နေသည့် မွတ်ကုလားယုတ်များ၏ မှိုလိုပေါက်နေသော ဗလီများအားလုံး ” ကို အာဖရိကနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ လို ယခုချက်ခြင်း တရားဝင် အမြန် မဖျက်သိမ်းနိုင်လျှင်တောင် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒအမှန်ကို လွှတ်တော်တွင် တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး အာဏာရ အစိုးရအဖွဲ့မှ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်
ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒမဲပေးထားလို့ လွှတ်တော်အမတ်များ ဖြစ်နေသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများမှ တဆင့် “ တရားမ၀င် ဆောက်လုပ်ထားသော ဗလီများ နှင့် တရားမ၀င် ဆောက်လုပ်ထားသော အာရေဗျီ စာသင်ကျောင်းများအား ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင် အမြန်ဖျက်သိမ်းပေးရေး အဆိုအား လွှတ်တော်၌ အဆိုတင်သွင်းပေးပါရန်
” မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမတ်မင်းများ ထံ ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြပါလို့ တိုင်းပြည် ၊ အမျိုး ၊ ဘာသာ ၊ သာသနာတော်ကြီး နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ အကျိုး မျှော်မှန်း၍ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Labels: မှန်ပြောင်းများ, မူဆလင်အကြံ ၊ တို့လက်မခံ, သတင်းစုံ
Labels: ဗုဒ္ဓဘာသာ, သကျယဉ်ကျေးမှု, အလာဟ်အရှင်ဆိုသည်မှာ
ပြည်ထောင်စုတ၀ှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့-
ဦးဇင်းဝီရသူ ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားပြောနေပါတယ်။
ရခိုင်အရေးအခင်းဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အရေးတခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာတမျိုးသား လုံးရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီရဲ့နောက်ကွယ်မှာအာရပ်ကမ္ဘာရှိနေပေမဲ့ ရခိုင်တွေရဲ့ဘက်ကို မြန်မာ တိုင်းရင်းသားတွေတောင် မရှိတာကိုတွေ့ နေရပါတယ်။ ဘင်္ဂလီတွေကို ၀ါကာအူဒင် ကဦးဆောင်နေ ပြီးတော့ ၀ါကာအူဒင်ကို ဂျလာလာနီက ကြိုးကိုင်နေတာပါ။ အာရပ်ကမ္ဘာရဲ့ထောက်ပံ့မူတွေနဲ့ဝါကာ အူဒင်တို့ဂျလာလာနီတို့ က ဘင်္ဂလီတွေကို အမိန့် ပေးပြီးတော့ စနစ်တကျ ဂျီဟတ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေကြ တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလက မြို့ သုံးမြို့ ကိုအပိုင်သိမ်းဖိုကြံတဲ့ဂျီဟတ်စစ်ပွဲ မြို့ သိမ်းတိုက်ပွဲ ထင်ရှားပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို စိတ်ကြွဆေးတွေကြွေးပြီးတော့ ရှေ့ ဆုံးကနေ တိုက်ခိုင်းတာလည်း အာရပ် စစ်ဗိုလ်တွေပါပဲ။ အာရပ်စစ်ဗိုလ်တွေဟာ အမျိုးသ္မီးဝတ်စုံတွေ ၀တ်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲထဲမှာ ရုပ်ဖျက်ပြီး တော့ပါလာပါတယ်။ မြို့ သုံးမြို့ တိုက်ပွဲကိုရှစ်လေးလုံးနေ့ မှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပေမဲ့ ရုတ်တရက် တောင်ကုတ်ဖြစ်ရပ်ကြောင့် သူတို့ တတွေဟာသတို့ ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်မူ အားကြီးပြီးတော့ - စစ်သင်တန်းတွေတက်ခဲ့တယ် လက်နက်တွေပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ သဘောနဲ့မေလမှာ အချိန်မတိုင်ပဲနဲ့မြို့ သုံးမြို့ ကိုသိမ်းတဲ့ တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တာပါ။
မအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့် မကျေပွဲ အခုအချိန်မှာ ထပ်နွှဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်လိုထပ်နွှဲဖို့အတွက်လည်း ရခိုင်ပြည်ကို +ို +င် +ျာ နိုင်ငံကြေညာထားတာက သက်သေရှိနေပါတယ်။ +ို +င်+ျာ နိုင်ငံအဖြစ်ကြေညာလိုက်တာဟာ ရခိုင်ပြည်ကို အစ္စလန်မစ် စတိတ် ထူထောင်မယ်လို့ တရားဝင် အသိပေးလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း တိုက်ခိုက်နေပါပြီ။
ရခိုင်အရေးအခင်းဟာ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကျူးကျော်စစ်ပွဲ သက်သက် ဂျီဟတ် စစ်ပွဲ သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက ပါတီအဖွဲ့ အစည်းတွေက ရခိုင် အရေးကို လစ်လျှူရှူထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူအတွက်ဖွဲ့ စည်းထားတာမှန်ရင် ပြည်သူကိုကာကွယ်ကြပါ။ တိုင်းပြည်အတွက် ဖွဲ့ စည်းထား တာမှန်ရင် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ကြပါ။ ရခိုင်အရေးဟာ တမျိုးသားလုံးအရေးဖြစ်တယ် ဆိုတာကို နားလည်ကြပါ။ ရခိုင်ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ကြပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကို ကာကွယ်ကြပါ။ ရခိုင် ပြည်သူတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်အမိမြန်မာပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ဦးဇင်း ၀ီရသူ အတိအလင်းကြေညာပါရစေ။
ဆရာတော် ဦးဝိရသူ၏ မွက်ကြားချက် (ဗွီဒီယို ရုပ်သံ)
Labels: အစ္စလာမ်လုပ်ရပ်များ, အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုရှင်သန်ရေး